1। रहस्यमय निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN)
2। निकोटिनमाइड Mononucleotide र NAD +
3। चूहों मा निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड कार्य को नवीनतम अनुसन्धान
4। Nicotinamide Mononucleotide (NMN) देखि लाभ
5। के निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN) वास्तव मा मानव मा काम गर्दछ?
6। कसरी निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड (एनएमएन) को प्रयोग गर्न को लागी एंटी एजिंगको लागी?
7। निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोइड साइड इफेक्ट तपाईलाई थाहा छ
8। मैले कहाँबाट एन्टिगरेसन ड्रग्स पत्ता लगाउन सक्दिन - निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN)?
सामना गरौ। विरोधी उमेर अनुहार क्रीम र कस्मेटिक सर्जरी यस स्मार्ट शताब्दीमा कुरा भएको थियो। तपाईलाई थाहा छ कि यी प्रक्रियाहरू छोटो अवधि हो र गम्भीर प्रभावहरू ट्रिगर गर्न सम्भव छ।
व्यावहारिक रूपमा, तपाईंले उमेरको विरुद्धमा लड्न सेलुलर र शारीरिक प्रक्रियाहरु लाई बुझ्न को लागी गर्नु पर्छ जुन उमेर सम्बन्धी अवस्थाहरुमा भूमिका निभाईन्छ। पछि, यो senescence को विरुद्ध लडने को तंत्र को कटौती गर्न सजिलो हुन्छ। विरोधी उमेर निकोटीइनमाइड Mononucleotide युवावस्थालाई पुनर्स्थापना गर्न काम गर्दछ।
यसको कच्चा रूपमा, यो CAS नम्बरको साथ पहिचान गर्दछ, 1094-61-7। यौगिक निकोटिनमाइड राइबोसाइड र फोस्फेट समूह जस्ता न्यूक्लिओसाइड को बीच प्रतिक्रिया बाट आउँछ।
यी दुव्र्यवहारकारी औषधीहरूले अटुटबाट रक्तचापमा घिमिरे जस्तै यात्रा गर्छन्। केही मिनेटमा, तिनीहरू रक्तचापमा लिएका छन्। यस कारणले, यो स्पष्ट हुन्छ कि अणुको बाटोमा कुनै पनि जैव रसायनिक प्रतिक्रियाहरू नहुन सक्छ।
पज्जी गतिले शोधकर्ताहरूले ट्रांसपोर्टरको सम्भावनालाई समात्न गरेको छ, जसले सेल ईन्धन वितरणलाई सहयोग गर्दछ। उदाहरणका लागि, इमई र तिनका सहयोगीहरूले जनवरी 7, 2019 मा प्रकाशित भर्खरको अध्ययनको माध्यमबाट जवाफ पाउन खोजे।
पुरानो उमेरको साथ, शरीरले अधिक NAD + को प्रयोग गर्दछ जुन यसको निर्माण गर्न सक्दछ। यद्यपि तपाईं निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोइड प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो प्रक्रिया अझैसम्मको समय बर्बाद हुनेछ जब सम्म यसको यातायात को लागि कुनै अणु छैन। रहस्यमय ट्राभर्पटर अनियमित गर्न स्क्रोलिङ राख्नुहोस् जुन उमेरका जटिलताहरूको 90% समाधान गर्नेछ।
शुद्धता > 98%
अन्य नाम · निकोटिनामाइड-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5'-फास्फेट
· निकोटिनामाइड रिबन्यूक्लोइड
· 3- (अमीनोकर्बोनील) -1- (एक्सएनएक्सएक्स-एफ-फास्फोनटो-बीटा-डी-रिब्रोअरेनेसोल) पिरिडिनियम
· निकोटिनामाइड रिबन्यूलेओसाइड 5'-फास्फेट
2. निकोटिनमाइड Mononucleotide र NAD +
यद्यपि यी दुई बायोमार्केटरहरू बीच औषध-सम्बन्धी सम्बन्ध छ, तपाईं कहिलेकाहीं सीधा प्रणालीमा NAD + व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न। जित्ने तरिका सम्भव छ, साइड इफेक्टहरू इन्फर्मयोग्य हुनेछन्। उदाहरणको लागि, एक उच्च खुराक थकान, चिन्ता र अनिद्रा द्वारा विशेषता हो। अधिक के छ, कम्ज प्लाज्मा झिल्ली को माध्यम ले कम पारगम्य छ।
यो विरोधी उमेर निकोटीइनमाइड Mononucleotide मौखिक औषधिको रुपमा उपलब्ध छ। यसको अवशोषण गटल को पर्खाल को माध्यम ले र परिसंचरण प्रणाली मा लगभग तीन मिनेट मा शुरू हुन्छ। 15 द्वाराth मिनेट, यो सबै लिइनेछ। इमाई र तिनका सह-शोधकर्ताहरूको एक विस्तृत अध्ययनले थाहा पाउँछ कि त्यहाँ एक प्रोटीन छ जसले यो तीव्र अवशोषण दरलाई गति दिन्छ।
① डे डेवो मार्गवे
② साल्टेज मार्ग
मानवमा NMN काम यस बाटोमा निर्भर छ।
③ NR रूपांतरण
1963 मा, वैज्ञानिकों को एक समूह स्थापित छ कि चूहों मा निकोटिनमाइड Mononucleotide काम डीएनए निर्भर निर्भर एंजाइम को प्रोत्साहित गर्नेछन्, जो सेलुलर कार्यहरु लाई बढावा दिन मा महत्वपूर्ण थिए। दुई वर्ष पछि, केही शोधकर्ताहरू नेप्सेप्प्यान र निकोटिनिक एसिड समावेश गर्ने NAD + बायोकेमिकल राईहरू लाई लाइट ल्याए।
3. चूहों मा निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड कार्य को नवीनतम अनुसन्धान
2016 अध्ययन सन्दर्भमा, मिल्स एट अल। मिल्यो कि NMN उपचार पुरानो चूहों मा दुवै शारीरिक र इम्युनोलोजिकल प्रकार्य को गिरावट को सामना गर्नेछ। यस NMN पूरक को अन्त मा अनुसन्धान, रोडेन्ट्स प्रतिरक्षा कोशिकाओं, लिम्फोसाइटिक प्रसार, र न्यूट्रोफिलहरुमा सिक्न को अभिव्यक्ति मा वृद्धि दर्ज गरियो।
पहिले, 2011 मा, मिल्स, योशिनो र इमईले चूहों को मोडेल को प्रयोग गरे थिए को लागि एनएडी + को भूमिका को पुष्टि गर्न को लागि आहार प्रेरित र उमेर संग सम्बन्धित मधुमेह। अझै अर्को एक्सएनएमएक्सएक्स अध्ययनमा उनले अन्य शोधकर्ताहरूसँग हात मिलाए जसको स्थापनाले एनएमएन पूरकले उमेरको चिसोमा अक्सिडिएट तनाव र वासकीय रोगको सामना गर्नेछ।
2015 मा, लङ एट अल। अल्जाइमरको रोग संग चूहों मा मस्तिष्क mitochondrial श्वसन घाटा मा NMN को प्रभाव को जांच को। टोलीले एनएमएन उपचारले कम ओसीआर (ओक्सीजन खपत दर), एनएडी + गिरोह, र मिमोकोन्ड्रिया असामान्यताहरू सहित एडीओलोजीको उपचार गर्न सक्षम भए।
2016, वांग र तिनका सहभागिताहरूले उनीहरूको अनुसन्धान प्रकाशित गरेपछि, यी विरोधी बुढो औषधिहरू युद्ध संज्ञानात्मक र तंत्रिका हानि, जो β-amyloid (Aβ) ओलिग्रोमरको परिणाम हो। यो ए एटी प्रोटीन न्यूरोटोक्सिक हो र ईडी रोगियहरुको मस्तिष्कमा पट्टको गठनको लागी जिम्मेवार छ। वांग एट अल। यसैले निष्कर्ष निकालेका थिए कि एनएमएन प्रशासनले चूहों मा एएडी ओलिगोलर्स मा कमी को कारण बन्यो, यसैले संज्ञानात्मक कार्यहरु लाई बढावा दिए।
यममोटो र तिनका सहकर्मीहरूले 2014 प्रकाशनको अनुसार, एनएमएनले थिचेमिक चोट र पुनःप्रफुअनको विरुद्धको हृदयलाई सुरक्षित गर्दछ। यो अध्ययन गर्नुअघि, यममोटो 2012 टोलीको भाग थियो, जसले थाहा पाएको थियो कि एनएडी + काउन्टरहरूले चूहमा आहार-प्रेरित मोटाइ राखे।
2016 मा, डी पिक्कोटोटो र एल्। र उनको साथी जैव-रसायनहरु एनएमएन पूरक को प्रभाव को चूहों को संवर्तकीय कार्यक्षमता मा अध्ययन गरे। उपस्थितिबाट, निकोटीइनमाइड मोनोन्युलेटोइड वासुलुल डाइफाइशन, ओक्सीडाइटी तनाव र उल्ट्यास्टिनमा कमीमा प्रभावकारी साबित भयो।
सबै preclinical अध्ययनहरूमा, शोध वैज्ञानिकहरूले चूहमा प्रशासक गर्नुअघि नै पानीमा निकोटिनामाइड मोनोनुलेलोटाइड थोक पाउडरको ज्ञात उपायहरू भंग गर्नेछन्।
4. Nicotinamide Mononucleotide (NMN) देखि लाभ
एनएमएनले मानव शरीरमा थुप्रै चिकित्सीय कार्यहरू र औषधीय प्रभावहरू छन्। एक दशक भन्दा कम मा, वैज्ञानिकले आफ्नो समय सबै निकोटिनमाइड Mononucleotide फायदा अध्ययन गर्न समर्पित गरेको छ उमेर बढाउने र उमेर सम्बन्धी रोगको व्याख्या गर्ने तंत्र सहित।
मानव प्रणाली मा यौगिक को फायदे मा पार गरौं।
सही समाधान शरीरको निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोइड र एनएडी + लाई बाह्य NMN उपचारको साथ पूरै गरेर पूरै छ। यी विरोधी बुढो औषधीले उमेरको कोशिकालाई जीवनको नयाँ पट्टि दिन्छ, जसले युवा युगमा राख्नेछ।
यसचिमेको अवस्थामा, तपाई अझै पनि निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनभने यसले एसिडिसस ट्रिगर गर्नेछ र माइक्रोकोन्डल इम्मेमेबिलिटीको कारण बनाउँछ; त्यसकारण, कार्डियस प्रणालीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी।
रक्त प्रवाहमा कमी हुँदा तपाईं कस्तो आशा गर्नुहुन्छ? खैर, राज्य मांसपेशियों को माला को कमी को लागी हुनेछ। यो कुनै संदेह छैन कि तपाईले ध्यान दिनुहुनेछ कि पुराना मान्छेसँग कम प्रदर्शन, कम सहनशीलता, इमब्लोब, र सबै समय थकित छ।
डा। सिन्कक्लेयरको आधारभूत खोजों मध्ये एक मा मांसपेशियों को बल को बढावा मा NMN को दक्षता मा केंद्रित थियो। उनको 2013 र भर्खरै 2018 अध्ययनको अनुसार, सात-दिन एनएमएन उपचारको लागी पुरानो चूहों शारीरिक रूप देखि फिट र उनीहरुका साना साथीहरु जस्तै सक्रिय भए।
मांसपेशी क्षमता र पुरानो चूहों को सहनशीलता (30-महिना पुरानो) पाँच-महिना पुरानो युवाहरु जस्तै थिए। यी युगहरू मानिसहरूमा लगभग 70 र 20 वर्षको तुलनामा तुलनात्मक हुन्छन्। निष्कर्षबाट, तपाईं NMN काम मानवमा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ मृत्युको रूपमा निश्चित छ।
अंकको अध्ययनले निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटोडाइडलाई फाइदा दिन्छ सिग्नेशन, स्ट्रोक, र मेमोरीको हानि रोकियो, जुन पुरानो उमेर संग प्रचलित छ। संक्षेप मा, यो विरोधी बुढापेपण पूरक न्यूरॉन्स को रखरखाव को लागि जिम्मेदार छ।
NMN मुख्यतया कुनै पनि न्यूरोलॉजिकल अवस्थाको ईटियोलोजीलाई लक्षित गर्छ। उदाहरणका लागि, अल्जाइमरको रोग NAD +, मस्तिष्कमा ओक्सीजन खपतको कम दर, र mitochondrial असामान्यताहरूको कमीको कारण हुन्छ। शरीर काउन्टरहरूमा एनएमएनको मात्रा बढ्दै यी सबै प्रभावहरू।
2012 मा प्रकाशित एक अध्ययन को अनुसार, निकोटिनमाइड Mononucleotide प्रभावी ढंग देखि intracerebral नोकसान को प्रबंधन, जो अक्सर स्ट्रोक को नेतृत्व गर्दछ। एनएमएन खुराकको अधीन पुरानो चूहों इन्टर्राक्रब्रल एनएडी + उत्पादनमा महत्वपूर्ण सुधार भएको छ। यी शोध मोडेलहरू नेमिकल स्ट्रोक, तंत्रिका मृत्यु, र न्यूरोलोजिकल सूजनको विरुद्ध अधिकतम सुरक्षा थियो।
टाइप II मधुमेहका मानिसहरू सधैं इन्सुलिनमा प्रतिरोध प्रदर्शन गर्छन्। यो विशेषता NAD + मा गिरावटको कारण हो। फलस्वरूप, कक्षहरू ओक्साइडेटिक्स तनाव र सूजनबाट निस्कन्छन्। यदि तपाईं अहिले पनि जवान हुनुहुन्छ भने, शरीरले केही शारीरिक शारीरिक क्रियाकलापको माध्यमबाट आफैलाई पुनरुत्थान गर्नेछ। तथापि, पुरानो उमेरको साथ, NAD + स्तर जीवन-समर्थन अंगहरुमा जस्तै कंकाल मांसपेशिहरु, लिभर, दिमाग, र पेंसेरिज जस्तै कम हुन्छ।
उमेर-सम्बन्धित मधुमेहको अर्को योगदान कारक एक उच्च फैट आहार हो। संतृप्त वसा को असामान्य मात्रा NAD + को जैव संश्लेषण को रोकथाम। उमेर र आहार-प्रेरित गरिएको मधुमेहको उपचारमा निकोटिनामाइड मोनोन्युक्लोइडको प्रभावकारी साबित गर्न बोलीमा योशिनो र तिनका साथीहरूले दुई चिसो मोडेल प्रयोग गरे।
10 दिनमा नजिकको एनएमएन को दैनिक खुराक को प्रबन्ध पछि, विद्वानहरु लाई स्थापित गरियो कि चूहों, जो उच्च-मोटी भोजन को अधीन थिए, मा सुधार इंसुलिन असंतोष दर्ज गरियो। अर्कोतर्फ, मधुमेह चूहों हाइपरलिपिडेमिया मा महत्वपूर्ण सुधार देखिन्थ्यो।
धेरै अध्ययनहरू निकोटिनमाइड मोनोन्युलेथीाइड फायदाहरूसँग छन् उमेरमा। उदाहरणका लागि, मिल्स र तिनका सहकर्मीहरूले एनएमएन युग-प्रेरित-प्रेरित शारीरिक गिरावटको प्रभावको खोजी गर्न चूहों मोडेलहरू चलाए।
जब यो रक्त प्रवाह सुधार गर्न आउँछ, मोटाइ उपचारको लागि NMN व्यायाम गर्न समान काम गर्दछ। एक एकल खुट्टा एक ट्रेडमिल प्रयोग को रूपमा राम्रो हुनेछ। यद्यपि, भिन्नता शरीरका अंगहरूमा NAD + सामग्रीको स्तरमा आउँछ। जबकि निकोटिनमाइड Mononucleotide बढावा लिन्छ र मांसपेशिहरु ऊतक दुवै मा NAD +, व्यायाम केवल मांसपेशिहरु भित्र परिसर को निर्माण गर्दछ।
5. के निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN) वास्तव मा मानव मा काम गर्दछ?
खैर, यो तपाइँको हेडमा बजिरहेको वर्तमान प्रश्न हुन सक्छ। कुनै पनि अवस्थामा, सबै अनुसन्धान र Preclinical अध्ययन निकोटिनमाइड Mononucleotide र NAD + मा केन्द्रित मार्री मोडेल को लक्षित गर्दै छन्।
सिन्क्क्लेयरले स्वीकार गर्दछ कि उसले पूरक लिन्छ। अब सम्म, विद्वानले कुनै पनि ग्रिड निकोटिनमाइड मोनेकोलुलेटोड साइड इफेक्ट रेकर्ड गरेको छैन। बरु, उहाँले प्रोफेसन गर्नुहुन्छ कि उहाँले तेज मन मान्नुहुन्छ। हङकङ र जेट लाग अब उनको लागि एक अहिल्यै तनाव छ। उनले थप आश्वासन दिए कि उनको बुबा, जो आफ्नो सत्तारूढ सत्तरमा छ, यसको पूरक लाग्छ।
एक नैदानिक ​​अध्ययनमा जुन 1 मा हुन्छst जून 2020, शोधकर्ताओं को संवेदनशीलता मा परिवर्तन र मानव मा NMN पूरक संग beta सेल कार्यहरु को स्थापना को खोज गर्दै छन्। विद्वानहरू वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल अफ मेसिस र टोकियोका केइओ युनिवर्सिटी स्कूल अफ मेसिसका हुन्।
अहिलेसम्म, कुनै प्रकाशनहरू छैनन् जुन मानवमा NMN कार्य प्रमाणित गर्दछ। तथापि, तपाईं लटका लागि किनकि केहि खाना पकाउनु भएको छ र क्लिनिकल परीक्षणहरू प्रतिज्ञा गर्न सकिन्छ।
6. कसरी निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड (एनएमएन) को प्रयोग गर्न को लागी एंटी एजिंगको लागी?
7. निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोइड साइड इफेक्ट तपाईलाई थाहा छ
सामान्य को पर्याय हो कि नाइनाइइनमाइड र अन्य विटामिन बीएक्सएन्यूएमएक्स परिसरनिकिनोइनाइडाइड mononucleotide साइड इफेक्ट्स द्वारा प्रदर्शित। तथापि, अधिकतर मानिसहरू उनीहरूलाई पनि अनुभव गर्दैनन्। उदाहरणका लागि, शीर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालय अनुसन्धान वैज्ञानिकले एनएमएन लिन स्वीकार्छन्, तर उनले कुनै दस्तक-प्रभावहरू देखाएका छैनन्।
8. मैले कहाँबाट एन्टिगरेसन ड्रग्स पत्ता लगाउन सक्दिन - निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN)?
एनएमएन को अनलाइन खरीद न केवल आफ्नो समय मा बचािन्छ तर विभिन्न मूल्यहरु को तुलना को लागि एक उत्कृष्ट प्लेटफर्म पनि प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्न भने, तपाईं अझै पनि निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटोइड किन्न सक्नुहुन्छ पूरक व्यक्तिगत प्रयोगको लागी। अर्डर गर्नु अघि, यो एक खाद्य ग्रेड उत्पादन हो भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्।
यो विरोधी उमेर निकोटीइनमिडाइड Mononucleotide केवल सेलुलर ईंन्धन वितरण मा सुधार र कोशिकाओं को कार्यक्षमता को बढावा गर्न मा कदम। यसले एनएडी + अपग्रेड गरेर कार्य गर्दछ, जुन हामी उमेरको रूपमा गिरावटमा पर्दछ।
2019-10-286मा: 03 बजे
कन्न ich das als Kapsel erwerben?
2019-10-30 1 मा: 24
Vielen Dank für das Lesen अनसेरेस आर्टिकल्स।
Wir haben NMN-Pulver im Angebot, aber Kapseln sind für uns nicht erhältlich।
Können Sie Bitte NMN - Pulver kaufen und dann Ihre NMN-Kapseln ਸੇर्बस्ट हर्स्टेलन?
दा एस सिच बेइ एनएमएन-पल्भर उम ईने ओरैले एन्नाहमे ह्यान्डल्ट, कन्नेन सिए ईनिज लीर कपेलन काउफेन, उम दास डाल् पल्भर आईन्जुब्रिन्गेन।
2019-11-177मा: 59
Здравейте, не намерих никъде цена (дори приблизителна) M NMN।
2019-11-296मा: 57
2019-11-224मा: 54 बजे
Ich Suche NMN - Pulver fine eine sublinguale Anwendung। Wie groß sind die Gebinde und zu welchem ​​Preis bieten Sie es an?
2019-11-296मा: 21
NMN पल्वर इस्टेट ईन ओरल प्रोडक्ट zum Einnehmen। डार्फ आईच साईले काट्यो, es für den persönlichen Gebrauch oder zum Weiterverkauf zu kaufen?
सूचना प्रविधिको Sie bitte eine E-Mail पठाउनुहोस्, यसैले।
इनेस मारिया क्रिस्टीना मार्टिना कोर्डोभा बेन्जाक्वेन
2019-11-257मा: 20 बजे
ich interessiere mich fuer diates productkt
2019-11-296मा: 16
Schön, dass Sie Interesse एक unserem NMN-Pulver haben। Es wird gesagt, das dieges Product Anti-Aging-Funktion haben।
बीपीसी-157 पूरक: बीपीसी-एक्सएनएमक्स कसरी इन्जेक्शन वा बीपीसी-एक्सएनएमएम ले मौलिक रूपमा लिन्छ?